အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကိန်းအောင်း၍ မြန်မာဘာသာစကား၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာ့ရိုးရာ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများကို တန်ဖိုးထားတတ်၊ လေးစားတတ်၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တတ် ပြီး ဆင်ခြင်တုံတရားရှိ၍ ပညာဉာဏ်အမြော်အမြင် မြင့်မားပြည့်စုံသည့် နိုင်ငံသားကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်။
၁။ မြန်မာဘာသာစကား၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများ တိုးတက်ထွန်းကား ပြန့်ပွားစေရန်နှင့် စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းတတ်ရန်၊ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ၊ အမျိုးသားရေး စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ခေတ်နှင့်လျော်ညီအံဝင်သော၊ သင်ရိုးနှင့် သင်ခန်းစာများ ကို ပို့ချရန်။
၂။ မြန်မာစာပေ၊ မြန်မာဘာသာစကား၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆက်စပ်နှီးနွယ်သော သုတေသန ပြုလုပ် လိုသူ၊ စိတ်ဝင်စားသူများကို အားပေးကူညီရန်။
၃။ ပညာရေးဆိုင်ရာ လူမှုဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးတည်ထောင်ပြီး မိမိတို့၏အနာဂတ် အခန်းကကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ထုဆစ်ပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်သည့် ဘက်လိုက်မှုကင်းစင်ပြီး တရားမျှတမှု ရှိသော လူတော်လူကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန်။
E-mail: winz6468@gmail.com, drzawwinmyan@myeikuniversity.edu.mm
2002-2007. PhD from Yangon University
2000-2002 Bachelor of Art and Master of Arts from Yangon University
From June 2014 to date, the Professor; Myeik University Myeik Township
From November 2011 to June 2014 Associate Professor Myanmar Department Hinthada University, Hinthada
From February 2010 to November 2011, Lecturer(Head of Department); Myanmar Department, National Management Collage , Yangon
From February 2008 to February 2010, Lecturer; Myeik University ,Myeik
From May 2005 to January 2008, Lecturer; Myanmar Department,Myeik University ,Myeik
From September 2002 to May 2005 Assistant Lecturer; Myanmar Department, Myeik University ,Myeik
From August 2002 to August 2002 Assistant Lecturer; Taungoo University, Myanmar Department,Taungoo
From September 2000 to July 2002 Assistant Lecturer; Myanmar Department, Yangon University ,Myeik
From June 1998 to September 2000 Tutor; Myanmar Department, Yangon University , Myeik
From December 1995 to June 1998 Tutor; Meiktila University, Myanmar Department, Meiktila
From February 1993 to February 1995 Tutor; Yangon University, Myanmar Department, Yangon
From Novenber 1986 to August 1989 Tutor; Hpa -An University, Myanmar Department, Hpa -An
Writing Local Research Journal ‌‌
A Study of Thakatho Bhone Naing’s Novel by Reader Response Theory.
Significant Grammatical Features Found in Medieval Mon Inscriptions.
The Importance of the Characters in Dhamma Vilatha Novek.
Natural Beauty and Inspiration of Poets.
A Study of coinage in Myanmar Language.
In December 2015,in MubanChombueng Rajabhat University Thailand; Attending the pre-negotiation of the MoU;
In December 2016, Thailand, Cultural Festival 2018 at PBRU University
In December 2017, Thailand, Cultural Festival 2017 at PBRU University
In December 2018, Thailand, Cultural Festival 2018 at PBRU University
E-mail: dawnwenwesoe79@gmail.com drnwenwesoemyan@myeikuniversity.edu.mm
Total views : 143343